トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Fantaro ny tena tsara toeram-pivarotana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko zava-nitranga
Inona no pachinko fivarotana na fahazoan-dalana manao ny hetsika, isika dia hijery na haka azy io izay no tapa-kevitra.
■ famantarana iray volana hetsika
Voalohany indrindra, dia pachinko efi-trano, izay natao famantarana zava-nitranga indray mandeha isam-bolana. Ao amin'ny efi-trano manatrika ny pachinko ianao, miezaka ny hanamarina raha manana olona mitana famantarana hetsika.
satria ny andro efa nanao famantarana hetsika, Dattari Open Date ho an'ny toeram-pivarotana, satria ny andro dia matetika no misy heviny manokana, dia hatao zavatra antony, dia azo miezaka ny Hanompo payout ny misy.
Indraindray, daty ny faran'ny andro iny ihany, fa misy pachinko efi-trano izay milaza rehetra takelaka zava-nitranga, toy izany pachinko fivarotana, baolina avy, satria mora sy naparitaky ny andro, any ho any amin'ny famerenana ny andro dia misy ny mety izay omena.
Na izany aza, raha toa ny volana indrindra, satria mifantoka amin'ny Hanompo, dia ny namely ny baolina avy noho ny pachinko efi-trano, toy ny fametrahana ny lehibe teo aloha.
na izany aza, mbola antsoina hoe famantarana hetsika, satria lehibe kokoa pachinko efi-trano izay mihazakazaka ho amin'ny famerenana ny tombony, mbola mila ho azo antoka ny rehetra ny payout fahatsapana ny masoko. Na, Tena tianao ny mampiasa ny tolotra toy ny tahirin-kevitra Robo toerana Fito.
■ ny maha samy hafa ny amin'ny hetsika misokatra
Matetika dia, fa ny Anao no mihazakazaka hatramin'ny maraina, izany ka nisokatra 15 ora sy 19 ora misokatra, dia misy fisehoan-javatra izay ny hampihena ny fotoana fandidiana. Raha mandeha ny fotoana dia fohy ny, dia mety toa toy ny hoe tsy fampahiratana, raha ny marina misy ny mifamadika amin'izany. Ao amin'ny pachinko efi-trano, saingy indraindray koa mety tanterahina any amin'ny modely malaza, ny tena ratsy dia hanao tsara izany zava-nitranga teo amin'ny modely tianao ny hampitombo ny fandidiana. Tsy te-hampitombo ny
nihazakazaka, dia koa ny hoe te-handao ny fahatsapana tsara. Ary koa ny tsena ao an-malaza modely, hetsika io dia matetika atao amin'ny toy izany modely tianao hampiasaina ela.
matetika, Na mafy aza ny karazana modely sy ny fantsika fanitsiana izay tsy nataony loatra ny napetraka, rehefa tonga ny fotoana maha samy hafa ny amin'ny misokatra zava-nitranga, dia matetika isika no tsara kokoa noho ny mahazatra. Noho izany antony izany, pachinko fivarotana izay nentina nivoaka ihany koa imbetsaka isam-bolana ny fotoana maha samy hafa ny amin'ny misokatra hetsika, dia ho niresaka momba ny fahazoan-dalana mankany.
Na izany aza, rehefa mazava tsara izany, na dia tian'ny olona modely, ka manome misy ihany koa ny hoe: "Efa sitrana na kely monja talohan'ny fanesorana ...", izay manodidina eto, Ya fivarotana ny raharaha politika avy amin'ny mahazatra dia misy ilaina ny fanadihadiana, satria azo itokisana.
■ ao amin'ny hetsika
havelako, toy ny grounder mitambatra, ny fisehoan-javatra toy izany lalao grounder ny modely anarana sy ny daty, miezaka ny manamarika fa ny ambony kokoa ny mety ho fisehoan-javatra Gase hisarihana mpanjifa tanjona.
ireo fironana ihany no tantaran'ny, tsy Mihatra amin'ny rehetra. Koa satria ny fivarotana hifidy hisy vokany lehibe eo amin'ny pachinko ny fandresena na ny faharesena, dia mila hanadihady ny toetra sy ny fironana ny hangout ny pachinko efi-trano avy amin'ny mahazatra koa manahirana. Na izany aza, raha mametraka ny karazan-metatra eo amin'ny lohany, dia tantara iray ..., fa toa zavatra tsy hita hatramin'izao. Events toy ireo, miezaka ny manamarika fa ny ambony kokoa ny mety ho fisehoan-javatra Gase hisarihana mpanjifa tanjona.
ireo fironana ihany no tantaran'ny, tsy Mihatra amin'ny rehetra. Koa satria ny fivarotana hifidy hisy vokany lehibe eo amin'ny pachinko ny fandresena na ny faharesena, dia mila hanadihady ny toetra sy ny fironana ny hangout ny pachinko efi-trano avy amin'ny mahazatra koa manahirana. Na izany aza, raha mametraka ny karazan-metatra eo amin'ny lohany, dia tantara iray ..., fa toa zavatra tsy hita hatramin'izao.